कर्पोरेट नेपाल , १३ आश्विन २०७६, सोमबार, ०३:५९ pm
काठमाडौं । ७४३ वटा स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार अब १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुको कारोबार बाणिज्य बैंकका शाखाबाट मात्रै गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई स्थानीय तह नै तोकेर शाखा स्थापनाको म्याडेड दिएको थियो । सोही अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तारको अभियान थालेका थिए ।
देशभर जम्मा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । तीमध्ये अब १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहेको छ । गभर्नर डा. नेपालले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा पनि बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भैसक्ने बताए । त्यस्तै, अब ६१ प्रतिशत नागरिक वित्तिय पहुँचमा आईपुगेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययन अनुसार ६१ प्रतिशत नागरिकमा वित्तिय पहुँच पुगेको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले केहि दिनभित्रै वित्तिय पहुँच सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्ववनिक गर्दैछ ।
उनले वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धि नभएमा गाउँ गाउँमा बैंक पुगे पनि केहि नहुने पनि बताए । उनले गाउँ गाउँ पुगेका बैंकका शाखाहरु वित्तिय साक्षरताको अभावमा बन्द भएको उदाहरण समेत पेश गर्दै वित्तिय साक्षरता बढाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मिडिया इन्टरनेशनलको ७ औं बार्षिकोत्सव समारोहमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)का सचिव रोयल आचार्यलाई वित्तिय साक्षरतामा कलम चलाए वापत सम्मान गरिएको थियो ।
ऋण लिने नेपालीको संख्या साढे १४ लाख, २ करोड ७३ लाखले बैंकमा राख्छन् पैसा
गर्भनर भन्छन्- बैंकहरु सञ्चालक र सीइओका निजी सम्पत्ति होइनन्
सात सय २७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्यो
ब्याजदरमा ध्यान नदिए बैंकहरुले धेरै लामो समय तरलताको समस्या झेल्नुपर्छः खतिवडा
चौतर्फी विरोधपछि स्वास्थ्यकर्मीको तलव काट्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
भिडियो कन्फरेन्स गरेर अर्थमन्त्रीले दातासँग मागे सहयोग
ढुक्क हुनुहोस्, आयात निरन्तर छ, आपूर्तिमा व्यवधान छैनः मन्त्री भट्ट